China fofonaina malefaka 100% polyester hamandoana lehilahy mpanamboatra t shirt sy mpanamboatra | Fahitana
fividianana volon'ondry malefaka 100% an'ny lehilahy
Ity t shirt ity dia vita amin'ny cationic polyester 100%, manana fiasana maina haingana. Tsara ho an'ny ekipa fanatanjahan-tena rehetra izay te-hiavaka amin'ny besinimaro amin'ny firongatry ny fironana!
100% hamandoana wicking polyester cationic
Ny lamba fofonaina faran'ity haingon'akanjo fanatanjahan-tena ity dia maivana ka tsy hanavesatra anao amin'ny hafanana sy ny hamandoana. Tonga amin'ny loko 30 mahery izy io hahafahanao mahita ilay mety amin'ny ekipanao, na ny lalao basket-ball na pick-up. Ary azonay ampiasaina izany ho an'ny ankizy, ny tanora ary ny olon-dehibe, miampy ny habeny koa azo namboarina.
Teo aloha: bokotra vita amin'ny landihazo any am-pianarana
Manaraka: Lahatsoratra manaraka
T-Shirt Lehilahy ambongadiny